Duritaanka Reaction - Shenzhen Youde string ku koobnayn
Waa maxay qar
Qar waa habka nidaamka cusub ee soo saara size waaweyn iyo alaabta tiro wayn oo degdeg ah. nidaamka qar waa monomer ama pre-polymer (qalabka PU) ee gobolka dareere la tiro gaar ah oo lagu qiyaasay qodan dhanka Electricity-bamka ee la isku qasin oo madax ka ah caaryada ah. Ka dib markii ey in lagu duraa caaryada hoos deegaanka hooseeyo cadaadiska / qolka heerkulka, waxaa jawaab deg deg ah iyo cross-xiriirinaya Daaweynta. Toban daqiiqo ka dib, waxaa la bedesheen doonaa, ka dibna u sii daayo ka caaryada, qayb waa wax soo saarka qar. Marxaladani waxay la fududeeyey karaa sida: kaydinta, cabbirka, hybrid, buux caaryada iyo Daaweynta, demould iyo post-processing.
Geedi socodka ah ee Reaction wax taaj oo kale duritaanka
Laba wax dareere ah ceeriin loo isticmaalaa in geedi socodka qar ayaa lagu kaydiyaa laba kaydka at heerkulka gaar ah, kaydka caadi yahay weel cadaadis. In wax taaj oo kale, sida caadiga ah ee 0.2 ~ 0.3 MPA cadaadis hoose stoste ee kaydka, iyo wareegayay si joogto ah ee kaydka, exchangers kulaylka iyo isku qasin madaxa. Sida polyurethane, heerkulka celceliska stoste waa 20 ~ 40 ℃, sax gacanta ku heerkulka uu yahay ± 1 ℃.
Waxyaabaha for qar
Cusbi General caadi ah, cusbi polyurethane, Ester vinylalkohol, amide cusbi Ester, cusbi roodhida, cusbi epoxy iyo wax kooban dhaqameed, iwm
wax Caadi: HD-PU4210, DCP-qar, AXSON-qar 875, iwm.
PS: Markii ugu Daaweynta of nidaamka qar inta badan waa by go'aanka wax taaj oo dejinta iyo size wax soo saarka. Intaa waxaa dheer, waxyaabaha qar baahan socday Daaweynta labaad ka dib markii laga sii daayay caaryada. Iyo sida nidaamka qar waa si degdeg ah (15-30 daqiiqo / piece) iyo-sax sare, waxaa haboon in ay soo saaraan tiro waaweyn iyo waxyaabaha size weyn, iyo size of shubay qayb weyn waa 2000mmX1200mmX1000mm, waayo, 10kg.